Universal Orlando na-edozi Oge Ọrụ - Thrilltalk.com
Home/Okwu ogige/Universal Orlando na-ahazi oge mmeghe
A na-emeghe ogige ntụrụndụ site na 09.00 nke ụtụtụ ruo elekere isii nke ụtụtụ. kwa ụbọchị. Nke ahụ ga-agbanwe n’izuụka ọzọ. N'ihi na ọnwa Ọgọst, na emepe awa nke ogige ọ bụla belata otu awa. Universal Studios Florida mepere site na 09.00 AM ruo 17.00 PM. (na-emechi otu awa tupu mgbe ahụ), ebe Islands nke Adventure na-arụ ọrụ site na 10.00am ruo 18.00pm. (imeghe otu awa mgbe e mesịrị).
Maka ugbu a, emepe awa maka Universal CityWalk agbanweghi.
N’izu gara aga, ebe ezumike ahụ kpebiri ịkagbu ya Oru ubochi nke Halloween nke afọ a n'ihi na-aga n'ihu ọgbaghara coronavirus ma kama ilekwasị anya na-erigbu ndị ogige ntụrụndụ maka ndị ọbịa n'ụbọchị.
Universal nwere ya na June 5 ogige ntụrụndụ maliteghachiri ọha na eze site n'ọtụtụ usoro ahụike na nchekwa, gụnyere ndị belatara ikike, iwu mmanye ihu na njikwa okpomọkụ.
CityWalk ọgbaghara coronavirus Florida Oru ubochi nke Halloween ogige ntụrụndụ mba nile nke orlando
Jiri ememe COVID-19 mee ememe Halloween
Universal Studios tara ahụhụ ndekọ na 2020
Ogige ntụrụndụ na-anọ ogologo oge n'ihi corona